Uyenza njani iKhalenda yokuThengisa ngeVidiyo | Martech Zone
Uyenza njani iKhalenda yokuThengisa ngeVidiyo
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 10, 2021 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 10, 2021 Douglas Karr
Kule veki iphelileyo, enye yeeprojekthi endizihambisileyo ibiluphicotho losetyenziso oluphathwayo lomthengi. Ngelixa bebesenza kakuhle kukhangelo lwe-desktop, bebesalele kumanqanaba eeselula ngokuchasene nabo bakhuphisana nabo. Njengoko ndandiphonononga indawo yabo kunye neendawo zabo bakhuphisana nabo, isithuba esinye kwisicwangciso sabo yayiyintengiso yevidiyo.
Ngaphezu kwesiqingatha sazo zonke iividiyo ezibonwayo zivela kwizixhobo eziphathwayo.
Isicwangciso si-multi-dimensional. Abathengi kunye namashishini benza itoni yophando kunye nokukhangela ngesixhobo esiphathwayo. Iividiyo ziyindlela efanelekileyo:
UYouTube usaqhubeka nokuba yinjini yesibini enkulu yokukhangela, uninzi lweevidiyo ezibukelwe ngesixhobo esiphathwayo.
I-YouTube ngumthombo obalaseleyo wamakhonkco obuyela kumxholo wesayithi yakho ukuba ukho Isitishi sikaYouTube kunye nevidiyo nganye iphuculwe kakuhle.
Amaphepha akho eselula, ngelixa eneenkcukacha kwaye enolwazi, anokuqhuba ngokupheleleyo ukubandakanyeka kunye nevidiyo eluncedo kuyo.
Kakade ke, ukuphuhlisa a ilayibrari yomxholo yevidiyo ifuna ukuhanjiswa komsebenzi ukusuka kwingcinga ngokuphucula. Kwaye isicwangciso sakho sevidiyo sinokubandakanya okuninzi Iindidi zevidiyo ukubalisa ibali lophawu lwakho ngempumelelo. Ikhalenda yakho akufuneki ibe sisihloko kuphela kunye nomhla wokupapasha, kufuneka iquke ukuhamba komsebenzi, kuquka:
Imihla ekufuneka ividiyo yakho idutshulwe ngayo, iguqulwe, ihlelwe, iveliswe, ipapashwe, kwaye inyuswe.
Iinkcukacha zamaqonga apho uya kube upapasha iividiyo zakho.
Iinkcukacha ngohlobo lwevidiyo, kubandakanywa nefomu emfutshane iireli ngokusebenzisa iinkcukacha zendlela yokuya.
Apho unokushumeka kwaye ukhuthaze iividiyo zakho, kubandakanya namanye amaphulo anokuthi abandakanye.
Uzakumeta njani ifuthe levidiyo kwintengiso yakho iyonke.
Njengalo naliphi na iphulo lokuthengisa, ndingasebenzisa a uluhlu olulungileyo lokucwangcisa khupha ingcamango yakho ukuze ukwazi ukwandisa impembelelo yokuthengisa ividiyo yakho. Ngelixa ividiyo inokufuna ezinye izixhobo ezongezelelweyo ngexesha kunye nemali, iintlawulo zevidiyo zibalulekile. Ngapha koko, ndingatsho ukuba uphoswa yinxalenye ebalulekileyo yabathengi bakho ngokungabandakanyi ividiyo kwisicwangciso sakho sokuthengisa.
Kule infographic, Imveliso enye ihamba ngayo yonke into oyifunayo ukuyazi malunga nokucwangcisa kunye nokulungelelanisa umxholo wakho wevidiyo ngeekhalenda zomxholo. Bacacisa ukuba ukusebenzisa ikhalenda yomxholo kunokunceda njani ukuphucula ukusebenza komxholo wakho wevidiyo. Kukho nemibono ephezulu evela kwiinkokeli zeshishini malunga nendlela inkqubo eyisitshixo sempumelelo yesicwangciso sakho sokuthengisa umxholo.
tags: kwenziwa kanjanikwi-infographicimveliso enyeumxholo wevidiyoIkhalenda yomxholo wevidiyoisicwangciso somxholo wevidiyoukuthengisa ividiyointengiso yevidiyo infographiciqhinga lokuthengisa ividiyo
I-7 ye-Automated Workflows eya kutshintsha umdlalo wakho wokuThengisa
KwiKhalenda: UIfakela njani iPopu yokucwangcisa okanye iKhalenda eZinzisiweyo kwiWebhusayithi yakho okanye kwisiza seWordPress